Nzaghachi agbaghaara Mmasị | Martech Zone
Nzaghachi na-ebupụta Mmasị Mmekọrịta
Monday, April 29, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Dika ulo oru ahia ahia buru ibu jikota ma nweta ngwa ndi ozo n'ime ngwakọ ngwaahịa ha, otutu oge enwere ikike nye ndi ahia ka ha dozie ihe ha choro. Ọ bụrụ na ị chọrọ email, ị na-aga otu saịtị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ mobile alerts, ọzọ… ma ọ bụrụ na ọ bụ SMS ka ọzọ. Dabere na Forrester, 77% nke ndị na-azụ ahịa chọrọ inwe ike ikpebi otu azụmaahịa ga-esi nwee ike ịkpọtụrụ ha.
N'ihi na oge mbụ, Nzaghachi na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịnakọta ma jikwaa mmasị n'ụzọ dị mfe ma isi ihe dijitalụ na nke anụ ahụ, ebe ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke iwu na ikpe dị oke ọnụ, niile n'ime otu teknụzụ teknụzụ.
N'ime afọ ole na ole gara aga, a na-akụzi ụdị ndị nwere ezigbo aha na ikpe na-achọ ọtụtụ iri nde dollar maka ahịa ndị ahịa na-enweghị ikike. Mmehie ndị a dị oke ọnụ na-eme n'ihi na ndị na-ere ahịa enweghị ikike teknụzụ iji jikọta ma jikwaa mmasị na mmasị ndị ahịa na ikikere n'ofe mmekọrịta ọ bụla, site na email na ngwa mkpanaka ruo ire ere. Nzaghachi Mmekọrịta Mmekọrịta na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịnakọta data a n'ụzọ ziri ezi, wee tinye ya na data profaịlụ ndị ọzọ, dị ka ịzụta akụkọ ihe mere eme na ihe ngosi mmadụ, iji nyefee ozi ndị na-abụghị naanị ndị mmadụ iche, kamakwa ịnabata. Steve Krause, Onye isi oche Onye isi oche nke Nlekọta Ngwaahịa na Nzaghachi
Nzaghachi Na-ahọrọ Mmasị na-enye ndị na-ere ahịa ohere ka
Zụlite otu echiche dị mma banyere mmasị na ikikere gafee ọwa niile - Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ isi mmalite nke data mmasị ndị ahịa echekwara gafee ọtụtụ ọdụ data.
Na-anakọta mmasị ebe ọ bụla ndị ahịa nọ - ma ha na-azụ ahịa na ụlọ ahịa, na-eme akara na Facebook, ma ọ bụ na-eme nchọgharị na saịtị mkpanaka, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkekọrịta n'ụzọ dị mfe ma chọọ nke ọma otu ha ga-esi chọọ ịkpọtụrụ ha.
Belata nnabata ihe egwu - Nzaghachi Mmekọrịta Mmasị na-akwado izi ezi nke ikikere ndị ahịa ma na-echekwa ozi ahụ na etiti, nyocha nyocha, na-eme dị ka otu isi iyi eziokwu maka mmasị ndị ahịa.
Na mmekorita ya na omume, omume igwe mmadụ na nke ndi mmadu nke ndi mmadu na-ekpughere ndi na-ere ahia, Nzaghachi Mmekọrịta Mmekọrịta mezue profaịlụ nke onye ahia - na-eme ka ihe omuma banyere ndi mmadu mara nke oma ma nye ndi ahia aka iwulite mmekorita, na-adigide na uru na ndi ahia ha.
Tags: mmasịnzaghachiNzaghachi Na-ahọrọ Mmasịjikọrọ mmasị
15% Jiri Social Media iji chọta azụmahịa dị na mpaghara
Daalụ maka isiokwu a! Echere m na ọ bụ n'ezie n'ezie na ike mfe anakọta ma jikwaa mmasị gafee ma digital na nkịtị aka ihe ga-abụ a ihe gara aga!